Nezvedu - Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd.
Suzhou Hanrui Magetsi Co, Ltd.
Flat musoro muchina
Suzhou Hanrui Electric Co., Ltd.iri muPurovhinzi yeJiangsu, guta rakanaka remvura kumaodzanyemba kweRwizi Yangtze, rakakomberedzwa neShanghai, Nanjing, Suzhou Xichang nedzimwe nzvimbo dzemumaguta, dzine mamiriro akakwirira uye kutakurwa kuri nyore. Iyo yekugadzira chirimwa iri muJinfeng Town, Zhangjiagang City, metallurgia indasitiri nyika, No. 48, Huarun mugwagwa.
Iyo kambani seti yeindasitiri kushandisa michina sisitimu yekuvandudza uye kugadzira, isiri-yakajairwa otomatiki chigadzirwa kuvandudza, kugadzira, kutengesa uye sevhisi seimwe yehunyanzvi emabhizinesi.
Parizvino, kambani inotarisa kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kugadzirwa kweasina-muyero pombi yekugadzirisa michina. Ikozvino zvigadzirwa zvikuru zvinogadzirwa uye zvinogadzirwa: chinotsvaira, pneumatic muchina, hydraulic muchina, polishing muchina, bhandi mhando chaiyo polishing muchina, rotary pombi yekucheka muchina, chamfering muchina, yakati sandara musoro muchina uye isiri-standard pombi michina.
Iyo kambani inotora iyo yepamusoro sainzi mugwagwa neyakaomarara manejimendi, inovavarira kukwana, uye inovavarira kugadzira zvirinani zvigadzirwa. Inoomerera kunheyo yemhando yekutanga, mukurumbira kutanga, uye bhizinesi tenet. Inoita nhamburiko dzese kupa yakanakisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi akakwana evagadziri manejimendi uye inosangana nezvinodiwa zvevatengi nemabhizinesi.
Gamuchirai vatengi kumba nekune dzimwe nyika kuti vauye kuzokurukura, shanda pamwe chete kuti vagadzire.